समिट एयरको जहाज आकशमै इन्जिन फेल भयो, के छ अवस्था ? थप जानकारी सहित — Imandarmedia.com
समिट एयरको जहाज आकशमै इन्जिन फेल भयो, के छ अवस्था ? थप जानकारी सहित
काठमाडौ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुक्लाका लागि उडेको समिट एअरको जहाज बीचबाटोबाटै काठमाडौं फर्केको छ। जहाजको इन्जिनमा समस्या आएपछि काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै जहाज फर्काइएको हो।
एनएएमपी जहाज आज बिहान ११:५ मिनेटमा काठमाडौंबाट लुक्लाका लागि उडेको थियो। जहाज उडेको १५ मिनेटमै इन्जिनमा समस्या आएको थियो। एक इन्जिन फेल भएपछि एक इन्जिनको भर उडेको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जहाजको बायाँतर्फ इन्जिनमा समस्या आएपछि जहाज काठमाडौं नै फिर्ता गरिएको जानकारीमा आएको छ।
जहाजमा १८ जना थिए। तीमध्ये तीन जना चालक दलका सदस्य हुन्। १५ यात्रुमध्ये १० जना विदेशी थिए भने पाँच जना नेपाली यात्रु थिए।
बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिए पनि पाइलटहरूले सिङ्गल इन्जिनकै भरमा जहाजलाई सकुशल अवतरण गरेको प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिए।जहाजमा रहेका यात्रुलाई अर्को जहाजमार्फत् लुक्ला पठाउने तयारी छ, उनले भने।